'लक्ष्मी बोम्ब'मा समलिंगी भूत बने अक्षय कुमार, यस्तो छ फस्टलुक ! – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsBollywood‘लक्ष्मी बोम्ब’मा समलिंगी भूत बने अक्षय कुमार, यस्तो छ फस्टलुक !
May 18, 2019 Tulasa Karki Bollywood, News 0
अक्षय कुमार बलिउडका स्टार मध्येका एक स्टार हुन् । जसले हरेक पटक आफ्नो प्रस्तुतीले फ्यान फ्लोव्सलाई चकित बनाउने गर्छन । उनले हरेक फिल्ममा आफुलाई छुटै तरिकाले प्रस्तुत गर्ने गर्छन । केहि समय अगाडी अक्षयले आफु साउथको सुपर हिट फिल्म ‘कंचना’को रिमिक ‘लक्ष्मी बोम्ब’ गर्ने जानकारी दिइएका थिए ।
सार्वजनिक खबरका अनुसार, यो फिल्ममा उनि समलिंगी भूतको भूमिकामा देखिदै छन् । उनको फ्यानहरुका लागी यो निकै चासोको विषय बनेको छ । कि यो लुकमा अक्षय कस्तो देखिन्छन । तर अब उनका फ्यानहरुको यो प्रतिक्ष्या लगभग सकिएको छ । कारण भखरैमात्र सार्वजनिक भएको अक्षयको फिल्म ‘लक्ष्मी बोम्ब’को फस्टलुक पोस्टर ।
जसलाई अक्षय स्वयमले उनको टुइटर एकाउन्टको हेडमा पोस्ट गरेका छन् । सार्वजनिक पोस्टरमा अक्षयले उनको आखामा गाजल लगाएका छन् भने उनको अनुहारको हाउ-भाउ हेरेर दर्शकले सजिलैसँग यो पत्ता लगाउन सक्छन की अक्षय यो फिल्मको लागी कति एक्साइटेड छन र उनका लागी यो क्यारेक्टर कतिको फिट छ ।